Ekwere m ya: Abụ m mkpụrụ akụ. Ahụrụ m asụsụ n'anya. Ma ọ bụrụ na e nwere otu ihe na-atọ m ụtọ karịa ikwu okwu ahụ bụ "zeitgeist" ọ na-eji ya na ahịrịokwu.
Ọ bụ ya mere na oké atụmanya na m na-eche kwa afọ mbata nke Google Zeitgeist. Ọ bụghị naanị n'ihi na m ga-ekwu ya ọtụtụ, kamakwa n'ihi na ọ bụ ihe dị egwu kwa afọ na-ele anya na steeti ọchụchọ site na afọ gara aga.
Maka ndị a na-agụghị akwụkwọ n'ụzọ nke GZ ka m ji ịhụnanya zoo aka na ya, ọ bụghị onye otu Wu-Tang Clan (nke ahụ bụ GZA aka The Genius). Kama nke ahụ GZ bụ, dị ka Google si kwuo, “ajụjụ ndị kachasị ewu ewu na nke kachasị ọsọ na afọ site na afọ” nwere ebumnuche ebumnuche kwuru nke ọma mana "zuru oke" ọysụ, iru uju na mmasi nke ọtụtụ n'ime anyị chere. "
Zeitgeist na-enye nlebara anya pụrụ iche n’ihe ụwa na-achọ na ntanetị. Gịnị kpaliri mmasị anyị nwerekọ otu? Gịnị bụ akụkọ? Kedu ndị ama ama nke gour ha? Obi onye ò mere ka ọha na eze hụ ihe ijuanya?
I nwedịrị ike belata ya n'akụkụ dị iche iche nke ụwa iji nyochaa usoro ọchụchọ gburugburu ụwa, ma ọ bụ lelee otú isiokwu si dị na oge. A na-enyocha usoro ọchụchọ na-arị elu ma na-ada ada na edemede gụnyere Celebrities, Sports, Science & Technology, na ndị ọzọ. My mmasị ọkacha mmasị Atiya bụ Quirky, ebe m mụtara na kasị ịrị elu Halloween ekike arịrịọ bụ Snooki. M wee jiri Google chọpụta onye bụ Snooki.
Ihe atụ a gosipụtara akụkụ kachasị amasị m nke GZ: voyeurism. Enwere m mmasị ruo n'ókè nke ịbụ onye nzuzu, na ịmatakwu ihe ụwa niile na-achọ maka afọ ojuju. Ọ na-enye m ohere ịchọpụta banyere nnukwu-nke-na-nnukwu-ewu ewu na-ezo aka omenala, ọtụtụ nke m ga-anọgide na kpamkpam na blissfully amaghị.
Ọ dị oke mfe ịbanye n'ime ụlọ nkuzi nke ịgụ banyere ịntanetị na ụlọ ọrụ teknụzụ. Dịka onye ahia site na azụmaahịa, ọ dị m mkpa iji jigide ma ọ dịkarịa ala ihe ọmụma na-arụ ọrụ banyere usoro ọdịbendị sara mbara. Ebe ọ bụ na agaghị m abụ onye na - efe "Jersey Shore" na mberede n'ihi na amatala m onye Snooki bụ, Google Zeitgeist na-enye ụzọ iji mee nke ahụ.
Tags: igwefoto +ịchọtausoroakụkọihe omume ahiaSliderisi mmalite